302s ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏အသုံးစရိတ်ကို Lara Trump ကကန့်ကွက် images and subtitles
ငါတို့တွေ့ဖူးသမျှ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နန်စီ၊ အများကြီး။ သငျသညျ, Nancy, အလွန်အများကြီး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စတီးဝပ် - အိုကေသမ္မတသမ္မတ စတီးဝပ် - အိုကေသမ္မတတိုက်ခိုက်မှုစတင်ကတည်းက အရည်အချင်းပြည့်မီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ငါရောက်နေ, ငါသူပြောပါလိမ့်မယ် ညီမျှခြင်း, ငါသူမနားမလည်ခံရ, ကောင်းပြီ, လော်ရာရဲ့ပြောပါလိမ့်မယ် သတိမထားမိကြ, ကောင်းစွာ, လော်ရာ TRUMP, 2020 အကြီးတန်းအကြံပေးသည် TRUMP, 2020 အကြီးတန်းအကြံပေးယခုငါနှင့်အတူလာအို, ကြိုဆိုသည် ငါနှင့်အတူယခု LAURA, ကြိုဆိုပါတယ်။ နောက်သို့။ >> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စတီးဝပ် - သင်ရောက်နေပြီ စတီးဝပ် - မနက် ၁၁:၀၀ နာရီမှာရောက်ပါတယ်။ 11:00 နာရီ။ >> ငါအားလုံးအခြေခံဖုံးအုပ်ပါတယ်။ >> ငါအားလုံးအခြေခံဖုံးအုပ်ပါတယ်။ စတီးဝပ် - သင်ပြောရန်ခွင့်ပြုပါသလား စတီးဝပ် - သမ္မတကဘာကိုပြောခွင့်ပြုထားပါသလဲ သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်ကတံခါးပိတ်တံခါးပိတ်တံခါးကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်တူသည်။ တံခါးပိတ်ထား? >> အကြောင်းကြီးစွာသောတှေး >> သမ္မတနှင့်ပတ်သက်သောမဟာအတွေးအခေါ်, စတူးဝပ်, သူ SO ပါပဲ ဥက္က္ဌ, စတီးဝပ်, သူ SO ပွင့်လင်းရဲ့သူသူအရာအားလုံးကိုချ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးကိုသူချယ်တယ်တွစ်တာမှာတွေးတောဆင်ခြင်၊ သူကတွစ်တာတွေအပေါ်မှာတွေးနေတယ်၊ ​​တချို့လူတွေဒါတွေကိုမချစ်ကြဘူး၊ တချို့လူတွေကသူမချစ်ကြပါဘူး, သူယေဘုယျအားဖြင့်သူရှိသည် သူဟာယေဘူယျအားဖြင့်ငါတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှသောရယ်စရာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပါ။ ငါတစ်ခါမှတွေ့ဖူးဖူးတဲ့ရယ်စရာအကောင်းဆုံးလူတွေ၊ ဘာကြောင့်လဲပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအတော်လေးကြည့်လို့ရတယ် ဘာကြောင့်မှန်ကန်တာလဲအတော်လေးကိုကြည့်လို့ရတယ်။ ဒီမှာရှိပါတယ်။ စတီးဝပ် - ခင်ဗျားကြိုးစားဖူးဖူးလား စတီးဝပ် - တွစ်တာမှာသင်သူ့ကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားဖူးသလား။ တွစ်တာတွင်သူ့ကို Rein? >> လုံးဝမဟုတ်ပါ။ >> လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သောတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုပါပဲ လူတွေနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကမ္ဘာတစ်လွှားနှင့် ကမ္ဘာတစ်လွှားမှလူများ၊ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်တို့မှကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်သည် တိုင်းပြည်, မီဒီယာ Filter မှတဆင့်တစ်ချိန်ကအိုင်တီရဲ့ မီဒီယာ Filters တစ်ချိန်ကအိုင်တီယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုးစားကြသည် ယုံကြည်ဖို့ခက်ပေမယ့်သူတို့ကသူပြောသောလမ်း၌အရာတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားသည် သူပြောတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။ သူဆိုလိုတာကအဓိပ္ပါယ်ပါ ထိုသူတို့နှင့်ဆိုလိုတာကသူ၏တိုက်ရိုက် LINK, Shocking ရဲ့။ တိုက်ရိုက် link, shocking ။ Stuart - တစ် ဦး အတွက်အလေးအနက်ထားရအောင် စတီးဝပ်: စက္ကန့်လေးနှစ်လေးနက်အောင်စို့။ ဒုတိယ။ ငါရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအကြောင်းပြောဆိုချင်တယ် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ THE အကြောင်းပြောဆိုလိုသောကြောင့်ငွေချေးသူအရေအတွက်များပြားသောကြောင့်။ DOLLAR NUMER များသည် ASTRONOMICAL ဟုခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နက္ခတ္တဗေဒ။ >> yeah ။ >> yeah ။ စတီးဝပ် - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် RNC စတီးဝပ် - ကမ်ပိန်းကိုဖြတ်ပြီး RNC သည်သန်း ၆၀ သာရောက်သည် ဇန်နဝါရီလအတွင်းသန်း ၆၀ လောက်ရှိပြီ။ ဇန်နဝါရီ >> ကျနော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်။ >> ကျနော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်။ STUART: ကျော် 525 သန်း စတီးဝပ် - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၅၂၅ သန်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်။ >> ဟုတ်သည်။ >> ဟုတ်သည်။ စတီးဝပ် - ဒီဟာတွေထဲမှာအများဆုံးပါ စတီးဝပ် - အရှက်တကွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ IN Impachment ၏နောက်ကျော။ >> ကောင်းပြီ, တကယ်အများကြီးအိုင်တီ >> ကောင်းပြီ, အိုင်တီအများကြီးအမှန်တကယ် WE နန်စီမြင်ပြီးနောက်တက် RAMPED ကျနော်တို့ Nancy PELOSI ခေါ်ဆိုမှုကိုမြင်ပြီးနောက်အရှိန်မြှင့် SO ငါ PELOSI ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုအတွက်ခေါ်ဆိုခြင်းငါသမ္မတဒုတိယနှင့်စက္ကန့်ကိုငါယူမည် သမ္မတကိုစက္ကန့်နှစ်ပတ်အတွင်းနင့်နင့်ကိုပြောမယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နန်စီအကြောင်းအနည်းငယ်သာဆုကြေးဇူးဘို့။ သောအနည်းငယ်သောလက်ဆောင်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ ဦး စားပေး သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့သမ္မတ ဦး စားပေးပေမယ့်အဘယ်သူမျှမခံခဲ့ရပေမယ့် သမ္မတကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုမပြုရသော်လည်းလူအများအားအားပေးသည် လူအများအားအားပေးအားမြှောက်လှူဒါန်းခြင်းသည်ဒေါ်လာ ၄၀ အောက်ဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှလှူဒါန်းမှုသည်ဒေါ်လာ ၄၀ အောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သမျှကိုပြောပြသည် ဒီတော့မင်းတို့သိသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မယ် ပိုက်ဆံအိတ်တွေအကြောင်း KNU သိရန် Trump စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသို့နှင့်လူတွေကဒီနည်းကိုခံစားရတယ် ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကခံစားရတယ် သမ္မတအနေနှင့်မည်သူမဆိုအမြဲတမ်းမြေပုံပုံကိုသိလိုသည် POLL NUMBERS ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်ကျနော်တို့တွေ့ပါတယ် NUMBERS မှန်ကန်တဲ့ကျနော်တို့ DEMOCRATS နှင့်အတူမြင်, POLL NUMBERS နေကြသည် ဒီမိုကရက်များ၊ ရေတွက်နံပါတ်များသည်မမှားပါ၊ အားလုံးအတူတူပြောကြသည် မှား, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယောဟနျပြောခဲ့ထိပ်ဆုံးဖွစျသညျသူသည်ပဉ္စမ၌ရှိ၏ သူကထိပ်ဆုံးမှာရှိခဲ့ပြီးသူသည်ခေတ္တတည်းခိုသော NEW Hampshire ရှိပြီးနောက်၊ New Hampshire ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားပုံ ကျနော်တို့အမှန်တကယ်ကြိုးစားကြည့်ရှုပုံကိုဒီမှာ, ခံစားချက်ကိုကြည့်ရှု, ဒီမှာပါပဲ အဲဒီမှာခံစားရတယ်မှာ, လူတွေကဒီတော့ဒေါသထွက်နေလို့ပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကနန်စီ PELOSI ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရမ်းဒေါသထွက်တယ် Nancy PELOSI နှင့်ဒီမိုကရက်များကကြိုးစားနေသည့်အချက်အလက်များအကြောင်း နှင့်ဒီမိုကရက်များက၎င်းတို့၏မဲကိုရရှိရန်ကြိုးစားနေသည်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်၎င်းတို့ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကိုရယူပါ၊ သူတို့သည်ဒီနည်းကိုပျက်ပြားစေရန်ကြိုးစားနေသည် သူတို့သည်အဘယ်သူမျှမသိသောကြောင့်ဤသမ္မတအားဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားနေသည် ဥက္ကES္ဌသူတော်ကောင်းတို့သည်ဤခဲယဉ်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမသိသောကြောင့် ဤပြောင်လှောင်သင်းဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏သူ့ကိုရိုက်နှက်နိုင်အောင်သူတို့ကြိုးစား သူ့ကိုရိုက်နှက်။ နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ၊ အလုပ်မလုပ်ပါ၊ စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု၊ အလုပ်မလုပ်၊ နောက်ပြန်လှည့်ပြီးလူတွေဒေါသထွက်နေတဲ့လှောင်ပြောင်သံကိုကြားရသောအခါသူတို့သည်မတတ်နိုင် Donald TRUMP အကြောင်း, သူတို့သည်သူ့ကိုထွက်နှင့်မဲပေးရန်မစောင့်နိုင်ပါ သူ့ကိုအထဲကရနှင့်မဲပေးရန်စောင့်ဆိုင်းသူတို့ပြသနေကြသည် သူတို့သည်အိတ်ဆောင်ထဲ၌ပြနေကြသည်။ လွယ်အိတ်။ စတီးဝပ် - သင်မလှည့်စားရန် စတီးဝပ် - လူနည်းနည်းပေးဖို့လူတွေကိုလက်နက်တွေလှည့်စားမပေးဘူး အနည်းငယ်သောငွေများပေးဆောင်ရန်အတွက်လက်နက်။ ပိုက်ဆံ သင်မပေါ်လာဘူး။ သင်မပေါ်လာဘူး။ >> အားလုံးမဟုတ်ပါ။ >> အားလုံးမဟုတ်ပါ။ Stuart: အလိုအလျောက်။ Stuart: အလိုအလျောက်။ >> သူတို့ကူညီလို။ >> သူတို့ကူညီလို။ လူတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲကြည့်ကြပါ လူတွေသမ္မတဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲကြည့်ရှုပါ၊ သမ္မတနှင့်သူတို့ပြောလျှင်ဒီနည်းကိုဖြစ်ပျက်နိုင်ပါ ဒီနည်းကိုသမ္မတထံသို့ဖြစ်နိုင်အိုင်တီမည်သည့်ဖြစ်ပျက်နိုင် သမ္မတအနေနှင့်၎င်းသည်လုံးဝမဟုတ်သောအမေရိကန်တစ် ဦး တစ်ယောက်မှဖြစ်နိုင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တစ်ခု၊ သူတို့လုံးဝကြိုးစားခဲ့တာမှားယွင်းနေတယ် TRUMP ကိုစွန့်ခွာပြီးလူတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကမှားတယ် Donald Trump နဲ့လူတွေဒေါသထွက်စေခြင်းနှင့်အခုသူတို့မတတ်နိုင် အခုအချိန်မှာသူတို့ဒေါသထွက်နေတဲ့အခုအချိန်မှာသူတို့မထွက်နိုင်နှင့်ယနေ့သင်တို့၏မဲမပေးနိုင်ခြင်း သငျသညျ NEW Hampshire နှင့် IOWA ၌နထေိုငျသှားမယ်ယနေ့ထွက်သွားနှင့်မဲပေး ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က New Hampshire နှင့် IOWA တွင်နေထိုင်ပါ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, သူတို့ကသူတို့မှတဆင့်အိုင်တီချပြီးနေကြသည် သူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်စာအုပ်တွေနဲ့အတူအိုင်တီချခြင်း, ငါတို့တိုက်နေကြသည် အိတ်ဆောင်, WE နောက်သို့တိုက်နေကြသည်, အခုငါတို့လှူဒါန်းမည်ပါလိမ့်မယ် နောက်သို့အခုပဲငါတို့လိုချင်သောသမ္မတအားလှူဒါန်းမည် သမ္မတကသူ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရွေးချယ်စေချင်သောကြောင့်။ သူပြန်ရွေးခဲ့တယ်။ စတီးဝပ် - စက္ကန့်နှစ်ပတ်လုံးခေါက်ထားပါ။ စတီးဝပ် - စက္ကန့်နှစ်ပတ်လုံးခေါက်ထားပါ။ ငါ Michael နှင့်ဆက်ဆံချင်တယ် ငါ Michael Bloom နှင့်အတူကိုင်တွယ်ချင်တယ်။ ချစ်သူ သူကသမ္မတ TRUMP'S သူကပြောပါတယ် သူကသမ္မတ TRUMP ရဲ့သူ့ကိုကြောက်ကြောင်းပြောပါတယ်။ သူ့ကိုကြောက် ဒီနည်းကိုနားထောင်ပါ။ ဒီနည်းကိုနားထောင်ပါ။ >> ငါက New Yorker မဟုတ်ပါ >> ငါက New Yorker ပေါ့, TRUMP မကြောက်ကြဘူး။ Trump ၏ AFRAID ။ AND Trump ကကြောက်တယ်။ AND Trump ကကြောက်တယ်။ [ချီးကျူးခြင်းနှင့်လက်မခံခြင်း] [ချီးကျူးခြင်းနှင့်လက်မခံခြင်း] >> တကယ်တော့အမှန်တကယ် TRUMP IS >> တကယ်တော့အမှန်တကယ် TRUMP THE အားလုံး US ၏ကြောက်လန့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အခန်းကိုကြောက်လန့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည် ကြှနျုပျတို့သညျအိုင်တီ GET ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ပြီးပြီ စတီးဝပ် - သင်ဘာတုံ့ပြန်သနည်း စတီးဝပ် - သင်ဘာကိုတုံ့ပြန်သလဲ။ ဘာလဲ >> OH, ငါ့ GOODNESS THE >> OH, ငါ၏ချစ်လှစွာသောသမ္မတသမ္မတမကြောက်ကြပါဘူး သမ္မတကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Mike Bloomberg ကိုမကြောက်ကြဘူး ဘလွန်းဘာ့ဂ်၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုသင်ကြည့်တဲ့အခါစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ သငျသညျဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြည့်ရှုဒီနည်းကိုဒီအသင်္ကေတလက္ခဏာ ဤသူကားဤ VIRTUE လက်မှတ်ထိုးပါတီ, အထောက်အထားမူဝါဒနှင့် PARTY, IDENTITY နိုင်ငံရေးနှင့်ဒီမှာ WHO က WHO ကရော - Old White White GUY သူသည်လမ်းဟောင်းသို့ ၀ ယ်နိုင်မည်ဟုထင်သည့် WHO မှ Old-White White ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီမှာ သူကသူ့လမ်းကိုဝယ်နိုင်သည်ထင်, အိုင်တီအမှန်တကယ်ပါပဲ အမည်စာရင်း, အိုင်တီအမှန်တကယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ငါဖြစ်လိမ့်မည် တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ငါငါတကယ်ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည် ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုရှေ့သို့ချီတက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ဖို့တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ် ဒီနည်းကိုရှေ့သို့ရွေ့လျားသကဲ့သို့မည်သူမျှမသွားနိုင်ပါ မည်သူမဆိုဤကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ် ဦး ကိုထောကျပံ့ဖို့သွားနေလျှင်, ငါ ဤကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့ပါ၊ သူသည်လေလံဆွဲသူကိုသိသည် သူသည်လေလံတွင်ငွေသွင်းနေကြောင်းသိသည်၊ သူ၏လမ်းစဉ်၊ လူတွေသူ့လမ်းစဉ်ကိုလာကြပေမဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာငါတို့ဘာတွေသိခဲ့ရသလဲငါစဉ်းစားမိတယ် 2016 ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ရာများကိုစဉ်းစားပါမည်မျှအရေးပါသည်မဟုတ်ပါ ဟီလာရီကြောင့်သင်ငွေမည်မျှငွေပမာဏမည်မျှအရေးပါသည်မဟုတ်ပါ သင် HILLARY CLINTON TRUMP ကိုကျော်လွန်ပြီးလမ်းကြောင့်ဖြုန်းတဲ့ငွေ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Trump Campaign ကိုကျော်လွန်ပြီး Clinton နည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘာကိုမြင်နေပါလိမ့်မည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်ကဘာလဲကြည့်ကြည့် ထို့နောက်ရလဒ်, ဒါမိုက်မဲသော AL Bloomberg အလွန်အကျွံသုံးစွဲနိုင်ပါတယ် BLOOMBERG သည်သူအလွန်အကျွံငွေများဖြုန်းနိုင်သကဲ့သို့သူလိုချင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မစဉ်းစားပါ။ သူလိုချင်တဲ့ငွေပမာဏမဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ဆက်နွှယ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ မဲဆန္ဒရှင်များကသူနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့သွားနဲ့ငါသွားရဲ့စဉ်းစားပါ သူနှင့်ငါ AND ငါအိုင်တီ SUGGEST ဖို့တကယ်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် သင်လုပ်တော့မည့်အကြံဥာဏ်ပေးရန်အမှန်ပင်ခဲယဉ်းသည် သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းပြုပါလိမ့်မယ် တစ်စုံတစ်ခုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုသင်တန်းဒီဥက္ကID္ဌကြောင့် ဒီနည်းကိုလေ့ကျင့်တဲ့အတွက်သင်တန်းကဒီအတွက်ဒီလောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ် ဤနိုင်ငံအတွက်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ တိုင်းပြည်, သင်အတိအကျဘာလဲဆိုတာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အိုင်တီဆိုတာဘာလဲ အပြေးနှင့်ဘာလဲလူတွေကိုပြောင်းလဲချင်နှင့် လူတွေအပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးမိုက်ကရိုဖုန်းကိုကျော်ပြီးသူတို့ရဲ့မဲကိုရွှေ့ချင်ကြလိမ့်မယ် သူတို့ရဲ့မဲဆန္ဒ MIKE BLOOMBERG ကိုကျော်ရွှေ့? Bloomberg? ငါတကယ်မသိဘူး။ ငါတကယ်မသိဘူး။ စတီးဝပ် - သင့်ကိုအမြန်ဆုံးပြောချင်ပါတယ် စတီးဝပ် - Valentine's အကြောင်းမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။ Valentine ရဲ့မေးခွန်းကိုအကြောင်း။ မနက်ဖြန်အိုင်တီ။ မနက်ဖြန်အိုင်တီ။ >> ငါသည်ငါ့ခင်ပွန်း IS မျှော်လင့်ပါတယ် >> ငါငါ့ယောက်ျားစောင့်ကြည့်နေသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ စောင့်ကြည့်။ စတီးဝပ် - မင်းကိုမပေးခဲ့ဘူး စတီးဝပ် - LAB DIAMOND ကိုသူပေးလိမ့်မယ်မဟုတ်လား။ LAB DIAMOND, သူလိုမလား >> သူလုပ်ပါသေချာအောင်ကြပါစို့။ >> သူလုပ်ပါသေချာအောင်ကြပါစို့။ ငါသူ့ကိုစကားပြောသင့်ထင်ပါတယ် သူနဲ့စကားပြောသင့်ပြီးသူမလုပ်ဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် သူမလုပ်ပါသေချာအောင်။ သော။ နားထောင်ပါ၊ ငါပျော်ရွှင်ရမယ် နားထောင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းထံမှမည်သည့်အရာမဆိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်ရလိမ့်မည်။
ဘလွန်းဘာ့ဂ်၏အသုံးစရိတ်ကို Lara Trump ကကန့်ကွက်
< start="1.268" dur="2.268"> ငါတို့တွေ့ဖူးသမျှ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နန်စီ၊ အများကြီး။ >
< start="3.537" dur="1.834"> သငျသညျ, Nancy, အလွန်အများကြီး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="5.373" dur="0.699"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စတီးဝပ် - အိုကေသမ္မတသမ္မတ >
< start="6.074" dur="1.8"> စတီးဝပ် - အိုကေသမ္မတတိုက်ခိုက်မှုစတင်ကတည်းက >
< start="7.875" dur="1.267"> အရည်အချင်းပြည့်မီတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ငါရောက်နေ, ငါသူပြောပါလိမ့်မယ် >
< start="9.143" dur="1.934"> ညီမျှခြင်း, ငါသူမနားမလည်ခံရ, ကောင်းပြီ, လော်ရာရဲ့ပြောပါလိမ့်မယ် >
< start="11.112" dur="1.533"> သတိမထားမိကြ, ကောင်းစွာ, လော်ရာ TRUMP, 2020 အကြီးတန်းအကြံပေးသည် >
< start="12.68" dur="3.469"> TRUMP, 2020 အကြီးတန်းအကြံပေးယခုငါနှင့်အတူလာအို, ကြိုဆိုသည် >
< start="16.15" dur="0.299"> ငါနှင့်အတူယခု LAURA, ကြိုဆိုပါတယ်။ >
< start="16.45" dur="0.533"> နောက်သို့။ >> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ >
< start="16.984" dur="1.4"> >> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စတီးဝပ် - သင်ရောက်နေပြီ >
< start="18.386" dur="1"> စတီးဝပ် - မနက် ၁၁:၀၀ နာရီမှာရောက်ပါတယ်။ >
< start="19.387" dur="5.171"> 11:00 နာရီ။ >> ငါအားလုံးအခြေခံဖုံးအုပ်ပါတယ်။ >
< start="24.559" dur="1.2"> >> ငါအားလုံးအခြေခံဖုံးအုပ်ပါတယ်။ စတီးဝပ် - သင်ပြောရန်ခွင့်ပြုပါသလား >
< start="25.76" dur="1.834"> စတီးဝပ် - သမ္မတကဘာကိုပြောခွင့်ပြုထားပါသလဲ >
< start="27.629" dur="1.3"> သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်ကတံခါးပိတ်တံခါးပိတ်တံခါးကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်တူသည်။ >
< start="28.963" dur="1.4"> တံခါးပိတ်ထား? >> အကြောင်းကြီးစွာသောတှေး >
< start="30.364" dur="2.235"> >> သမ္မတနှင့်ပတ်သက်သောမဟာအတွေးအခေါ်, စတူးဝပ်, သူ SO ပါပဲ >
< start="32.6" dur="1.267"> ဥက္က္ဌ, စတီးဝပ်, သူ SO ပွင့်လင်းရဲ့သူသူအရာအားလုံးကိုချ >
< start="33.868" dur="1.834"> ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလုံးကိုသူချယ်တယ်တွစ်တာမှာတွေးတောဆင်ခြင်၊ >
< start="35.737" dur="2.234"> သူကတွစ်တာတွေအပေါ်မှာတွေးနေတယ်၊ ​​တချို့လူတွေဒါတွေကိုမချစ်ကြဘူး၊ >
< start="38.006" dur="1.9"> တချို့လူတွေကသူမချစ်ကြပါဘူး, သူယေဘုယျအားဖြင့်သူရှိသည် >
< start="39.908" dur="1.199"> သူဟာယေဘူယျအားဖြင့်ငါတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှသောရယ်စရာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပါ။ >
< start="41.109" dur="2.201"> ငါတစ်ခါမှတွေ့ဖူးဖူးတဲ့ရယ်စရာအကောင်းဆုံးလူတွေ၊ ဘာကြောင့်လဲပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအတော်လေးကြည့်လို့ရတယ် >
< start="43.311" dur="0.7"> ဘာကြောင့်မှန်ကန်တာလဲအတော်လေးကိုကြည့်လို့ရတယ်။ >
< start="44.012" dur="4.803"> ဒီမှာရှိပါတယ်။ စတီးဝပ် - ခင်ဗျားကြိုးစားဖူးဖူးလား >
< start="48.85" dur="1.6"> စတီးဝပ် - တွစ်တာမှာသင်သူ့ကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားဖူးသလား။ >
< start="50.485" dur="1.233"> တွစ်တာတွင်သူ့ကို Rein? >> လုံးဝမဟုတ်ပါ။ >
< start="51.753" dur="0.866"> >> လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သောတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုပါပဲ >
< start="52.62" dur="1.1"> လူတွေနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကမ္ဘာတစ်လွှားနှင့် >
< start="53.721" dur="2.201"> ကမ္ဘာတစ်လွှားမှလူများ၊ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်တို့မှကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်သည် >
< start="55.924" dur="1.2"> တိုင်းပြည်, မီဒီယာ Filter မှတဆင့်တစ်ချိန်ကအိုင်တီရဲ့ >
< start="57.125" dur="1.067"> မီဒီယာ Filters တစ်ချိန်ကအိုင်တီယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုးစားကြသည် >
< start="58.226" dur="1.5"> ယုံကြည်ဖို့ခက်ပေမယ့်သူတို့ကသူပြောသောလမ်း၌အရာတို့ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားသည် >
< start="59.761" dur="2.301"> သူပြောတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။ သူဆိုလိုတာကအဓိပ္ပါယ်ပါ >
< start="62.096" dur="1.634"> ထိုသူတို့နှင့်ဆိုလိုတာကသူ၏တိုက်ရိုက် LINK, Shocking ရဲ့။ >
< start="63.764" dur="1.201"> တိုက်ရိုက် link, shocking ။ Stuart - တစ် ဦး အတွက်အလေးအနက်ထားရအောင် >
< start="64.999" dur="0.333"> စတီးဝပ်: စက္ကန့်လေးနှစ်လေးနက်အောင်စို့။ >
< start="65.333" dur="2.268"> ဒုတိယ။ ငါရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအကြောင်းပြောဆိုချင်တယ် >
< start="67.602" dur="3.636"> ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ THE အကြောင်းပြောဆိုလိုသောကြောင့်ငွေချေးသူအရေအတွက်များပြားသောကြောင့်။ >
< start="71.272" dur="0.533"> DOLLAR NUMER များသည် ASTRONOMICAL ဟုခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ >
< start="71.84" dur="0.399"> နက္ခတ္တဗေဒ။ >> yeah ။ >
< start="72.24" dur="2.702"> >> yeah ။ စတီးဝပ် - စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့် RNC >
< start="74.976" dur="0.867"> စတီးဝပ် - ကမ်ပိန်းကိုဖြတ်ပြီး RNC သည်သန်း ၆၀ သာရောက်သည် >
< start="75.844" dur="0.333"> ဇန်နဝါရီလအတွင်းသန်း ၆၀ လောက်ရှိပြီ။ >
< start="76.211" dur="1.5"> ဇန်နဝါရီ >> ကျနော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်။ >
< start="77.713" dur="0.699"> >> ကျနော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်။ STUART: ကျော် 525 သန်း >
< start="78.413" dur="1.1"> စတီးဝပ် - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၅၂၅ သန်း။ >
< start="79.514" dur="1.334"> လွန်ခဲ့သောနှစ်။ >> ဟုတ်သည်။ >
< start="80.849" dur="0.699"> >> ဟုတ်သည်။ စတီးဝပ် - ဒီဟာတွေထဲမှာအများဆုံးပါ >
< start="81.583" dur="1.033"> စတီးဝပ် - အရှက်တကွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ >
< start="82.651" dur="1.567"> IN Impachment ၏နောက်ကျော။ >> ကောင်းပြီ, တကယ်အများကြီးအိုင်တီ >
< start="84.219" dur="1.801"> >> ကောင်းပြီ, အိုင်တီအများကြီးအမှန်တကယ် WE နန်စီမြင်ပြီးနောက်တက် RAMPED >
< start="86.021" dur="1.901"> ကျနော်တို့ Nancy PELOSI ခေါ်ဆိုမှုကိုမြင်ပြီးနောက်အရှိန်မြှင့် SO ငါ >
< start="87.923" dur="1.233"> PELOSI ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုအတွက်ခေါ်ဆိုခြင်းငါသမ္မတဒုတိယနှင့်စက္ကန့်ကိုငါယူမည် >
< start="89.158" dur="1.199"> သမ္မတကိုစက္ကန့်နှစ်ပတ်အတွင်းနင့်နင့်ကိုပြောမယ် >
< start="90.358" dur="1.1"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နန်စီအကြောင်းအနည်းငယ်သာဆုကြေးဇူးဘို့။ >
< start="91.492" dur="1.301"> သောအနည်းငယ်သောလက်ဆောင်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ ဦး စားပေး >
< start="92.827" dur="1.501"> သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့သမ္မတ ဦး စားပေးပေမယ့်အဘယ်သူမျှမခံခဲ့ရပေမယ့် >
< start="94.329" dur="2.835"> သမ္မတကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုမပြုရသော်လည်းလူအများအားအားပေးသည် >
< start="97.199" dur="2.167"> လူအများအားအားပေးအားမြှောက်လှူဒါန်းခြင်းသည်ဒေါ်လာ ၄၀ အောက်ဖြစ်သည်။ >
< start="99.367" dur="1.4"> ပျမ်းမျှလှူဒါန်းမှုသည်ဒေါ်လာ ၄၀ အောက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သမျှကိုပြောပြသည် >
< start="100.769" dur="1.033"> ဒီတော့မင်းတို့သိသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မယ် >
< start="101.837" dur="1.8"> ပိုက်ဆံအိတ်တွေအကြောင်း KNU သိရန် >
< start="103.639" dur="1.132"> Trump စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသို့နှင့်လူတွေကဒီနည်းကိုခံစားရတယ် >
< start="104.773" dur="1.801"> ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကခံစားရတယ် >
< start="106.575" dur="2.301"> သမ္မတအနေနှင့်မည်သူမဆိုအမြဲတမ်းမြေပုံပုံကိုသိလိုသည် >
< start="108.877" dur="3.769"> POLL NUMBERS ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်ကျနော်တို့တွေ့ပါတယ် >
< start="112.647" dur="0.7"> NUMBERS မှန်ကန်တဲ့ကျနော်တို့ DEMOCRATS နှင့်အတူမြင်, POLL NUMBERS နေကြသည် >
< start="113.348" dur="0.9"> ဒီမိုကရက်များ၊ ရေတွက်နံပါတ်များသည်မမှားပါ၊ အားလုံးအတူတူပြောကြသည် >
< start="114.249" dur="2.435"> မှား, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယောဟနျပြောခဲ့ထိပ်ဆုံးဖွစျသညျသူသည်ပဉ္စမ၌ရှိ၏ >
< start="116.685" dur="0.766"> သူကထိပ်ဆုံးမှာရှိခဲ့ပြီးသူသည်ခေတ္တတည်းခိုသော NEW Hampshire ရှိပြီးနောက်၊ >
< start="117.452" dur="1.334"> New Hampshire ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားပုံ >
< start="118.82" dur="2.335"> ကျနော်တို့အမှန်တကယ်ကြိုးစားကြည့်ရှုပုံကိုဒီမှာ, ခံစားချက်ကိုကြည့်ရှု, ဒီမှာပါပဲ >
< start="121.189" dur="1.868"> အဲဒီမှာခံစားရတယ်မှာ, လူတွေကဒီတော့ဒေါသထွက်နေလို့ပဲ >
< start="123.058" dur="1.534"> ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကနန်စီ PELOSI ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရမ်းဒေါသထွက်တယ် >
< start="124.626" dur="1.901"> Nancy PELOSI နှင့်ဒီမိုကရက်များကကြိုးစားနေသည့်အချက်အလက်များအကြောင်း >
< start="126.562" dur="2.001"> နှင့်ဒီမိုကရက်များက၎င်းတို့၏မဲကိုရရှိရန်ကြိုးစားနေသည်၊ >
< start="128.564" dur="1.3"> ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်၎င်းတို့ဆန္ဒမဲပေးခြင်းကိုရယူပါ၊ သူတို့သည်ဒီနည်းကိုပျက်ပြားစေရန်ကြိုးစားနေသည် >
< start="129.865" dur="1.033"> သူတို့သည်အဘယ်သူမျှမသိသောကြောင့်ဤသမ္မတအားဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားနေသည် >
< start="130.933" dur="1.633"> ဥက္ကES္ဌသူတော်ကောင်းတို့သည်ဤခဲယဉ်းသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမသိသောကြောင့် >
< start="132.601" dur="2.702"> ဤပြောင်လှောင်သင်းဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏သူ့ကိုရိုက်နှက်နိုင်အောင်သူတို့ကြိုးစား >
< start="135.304" dur="1.267"> သူ့ကိုရိုက်နှက်။ နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ၊ အလုပ်မလုပ်ပါ၊ >
< start="136.572" dur="1.634"> စွပ်စွဲပြစ်တင်မှု၊ အလုပ်မလုပ်၊ >
< start="138.24" dur="1.501"> နောက်ပြန်လှည့်ပြီးလူတွေဒေါသထွက်နေတဲ့လှောင်ပြောင်သံကိုကြားရသောအခါသူတို့သည်မတတ်နိုင် >
< start="139.775" dur="1.634"> Donald TRUMP အကြောင်း, သူတို့သည်သူ့ကိုထွက်နှင့်မဲပေးရန်မစောင့်နိုင်ပါ >
< start="141.41" dur="3.703"> သူ့ကိုအထဲကရနှင့်မဲပေးရန်စောင့်ဆိုင်းသူတို့ပြသနေကြသည် >
< start="145.147" dur="0.366"> သူတို့သည်အိတ်ဆောင်ထဲ၌ပြနေကြသည်။ >
< start="145.514" dur="2.201"> လွယ်အိတ်။ စတီးဝပ် - သင်မလှည့်စားရန် >
< start="147.716" dur="2.068"> စတီးဝပ် - လူနည်းနည်းပေးဖို့လူတွေကိုလက်နက်တွေလှည့်စားမပေးဘူး >
< start="149.818" dur="0.299"> အနည်းငယ်သောငွေများပေးဆောင်ရန်အတွက်လက်နက်။ >
< start="150.119" dur="0.766"> ပိုက်ဆံ သင်မပေါ်လာဘူး။ >
< start="150.886" dur="1.033"> သင်မပေါ်လာဘူး။ >> အားလုံးမဟုတ်ပါ။ >
< start="151.92" dur="1.267"> >> အားလုံးမဟုတ်ပါ။ Stuart: အလိုအလျောက်။ >
< start="153.188" dur="1.634"> Stuart: အလိုအလျောက်။ >> သူတို့ကူညီလို။ >
< start="154.856" dur="0.8"> >> သူတို့ကူညီလို။ လူတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲကြည့်ကြပါ >
< start="155.691" dur="1.634"> လူတွေသမ္မတဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲကြည့်ရှုပါ၊ >
< start="157.326" dur="0.866"> သမ္မတနှင့်သူတို့ပြောလျှင်ဒီနည်းကိုဖြစ်ပျက်နိုင်ပါ >
< start="158.194" dur="2.033"> ဒီနည်းကိုသမ္မတထံသို့ဖြစ်နိုင်အိုင်တီမည်သည့်ဖြစ်ပျက်နိုင် >
< start="160.229" dur="1.867"> သမ္မတအနေနှင့်၎င်းသည်လုံးဝမဟုတ်သောအမေရိကန်တစ် ဦး တစ်ယောက်မှဖြစ်နိုင်ခဲ့သည်။ >
< start="162.098" dur="1.133"> အမေရိကန်တစ်ခု၊ သူတို့လုံးဝကြိုးစားခဲ့တာမှားယွင်းနေတယ် >
< start="163.265" dur="1.601"> TRUMP ကိုစွန့်ခွာပြီးလူတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကမှားတယ် >
< start="164.9" dur="0.9"> Donald Trump နဲ့လူတွေဒေါသထွက်စေခြင်းနှင့်အခုသူတို့မတတ်နိုင် >
< start="165.801" dur="2.335"> အခုအချိန်မှာသူတို့ဒေါသထွက်နေတဲ့အခုအချိန်မှာသူတို့မထွက်နိုင်နှင့်ယနေ့သင်တို့၏မဲမပေးနိုင်ခြင်း >
< start="168.17" dur="1"> သငျသညျ NEW Hampshire နှင့် IOWA ၌နထေိုငျသှားမယ်ယနေ့ထွက်သွားနှင့်မဲပေး >
< start="169.205" dur="3.836"> ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က New Hampshire နှင့် IOWA တွင်နေထိုင်ပါ >
< start="173.042" dur="1.967"> ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က, သူတို့ကသူတို့မှတဆင့်အိုင်တီချပြီးနေကြသည် >
< start="175.011" dur="0.899"> သူတို့ရဲ့အိတ်ကပ်စာအုပ်တွေနဲ့အတူအိုင်တီချခြင်း, ငါတို့တိုက်နေကြသည် >
< start="175.911" dur="2.235"> အိတ်ဆောင်, WE နောက်သို့တိုက်နေကြသည်, အခုငါတို့လှူဒါန်းမည်ပါလိမ့်မယ် >
< start="178.18" dur="1.234"> နောက်သို့အခုပဲငါတို့လိုချင်သောသမ္မတအားလှူဒါန်းမည် >
< start="179.448" dur="1.401"> သမ္မတကသူ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရွေးချယ်စေချင်သောကြောင့်။ >
< start="180.883" dur="2.001"> သူပြန်ရွေးခဲ့တယ်။ စတီးဝပ် - စက္ကန့်နှစ်ပတ်လုံးခေါက်ထားပါ။ >
< start="182.918" dur="1.835"> စတီးဝပ် - စက္ကန့်နှစ်ပတ်လုံးခေါက်ထားပါ။ ငါ Michael နှင့်ဆက်ဆံချင်တယ် >
< start="184.787" dur="0.333"> ငါ Michael Bloom နှင့်အတူကိုင်တွယ်ချင်တယ်။ >
< start="185.154" dur="3.069"> ချစ်သူ သူကသမ္မတ TRUMP'S သူကပြောပါတယ် >
< start="188.224" dur="4.537"> သူကသမ္မတ TRUMP ရဲ့သူ့ကိုကြောက်ကြောင်းပြောပါတယ်။ >
< start="192.762" dur="1.567"> သူ့ကိုကြောက် ဒီနည်းကိုနားထောင်ပါ။ >
< start="194.33" dur="3.603"> ဒီနည်းကိုနားထောင်ပါ။ >> ငါက New Yorker မဟုတ်ပါ >
< start="197.934" dur="0.833"> >> ငါက New Yorker ပေါ့, TRUMP မကြောက်ကြဘူး။ >
< start="198.802" dur="1.366"> Trump ၏ AFRAID ။ AND Trump ကကြောက်တယ်။ >
< start="200.169" dur="1.434"> AND Trump ကကြောက်တယ်။ [ချီးကျူးခြင်းနှင့်လက်မခံခြင်း] >
< start="201.637" dur="3.336"> [ချီးကျူးခြင်းနှင့်လက်မခံခြင်း] >> တကယ်တော့အမှန်တကယ် TRUMP IS >
< start="204.974" dur="5.004"> >> တကယ်တော့အမှန်တကယ် TRUMP THE အားလုံး US ၏ကြောက်လန့် >
< start="210.012" dur="1.701"> ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အခန်းကိုကြောက်လန့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည် >
< start="211.747" dur="0.5"> ကြှနျုပျတို့သညျအိုင်တီ GET ရရှိပါလိမ့်မယ်။ >
< start="212.248" dur="2.735"> ပြီးပြီ စတီးဝပ် - သင်ဘာတုံ့ပြန်သနည်း >
< start="214.984" dur="0.299"> စတီးဝပ် - သင်ဘာကိုတုံ့ပြန်သလဲ။ >
< start="215.284" dur="0.8"> ဘာလဲ >> OH, ငါ့ GOODNESS THE >
< start="216.118" dur="1.901"> >> OH, ငါ၏ချစ်လှစွာသောသမ္မတသမ္မတမကြောက်ကြပါဘူး >
< start="218.054" dur="1.033"> သမ္မတကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက Mike Bloomberg ကိုမကြောက်ကြဘူး >
< start="219.088" dur="1.868"> ဘလွန်းဘာ့ဂ်၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုသင်ကြည့်တဲ့အခါစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ >
< start="220.957" dur="3.235"> သငျသညျဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြည့်ရှုဒီနည်းကိုဒီအသင်္ကေတလက္ခဏာ >
< start="224.194" dur="1.2"> ဤသူကားဤ VIRTUE လက်မှတ်ထိုးပါတီ, အထောက်အထားမူဝါဒနှင့် >
< start="225.428" dur="2.668"> PARTY, IDENTITY နိုင်ငံရေးနှင့်ဒီမှာ WHO က WHO ကရော - Old White White GUY >
< start="228.098" dur="2.133"> သူသည်လမ်းဟောင်းသို့ ၀ ယ်နိုင်မည်ဟုထင်သည့် WHO မှ Old-White White ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒီမှာ >
< start="230.266" dur="1.734"> သူကသူ့လမ်းကိုဝယ်နိုင်သည်ထင်, အိုင်တီအမှန်တကယ်ပါပဲ >
< start="232.034" dur="1.634"> အမည်စာရင်း, အိုင်တီအမှန်တကယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ငါဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="233.703" dur="1.601"> တကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ငါငါတကယ်ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည် >
< start="235.338" dur="1.701"> ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုရှေ့သို့ချီတက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ဖို့တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ် >
< start="237.073" dur="0.933"> ဒီနည်းကိုရှေ့သို့ရွေ့လျားသကဲ့သို့မည်သူမျှမသွားနိုင်ပါ >
< start="238.041" dur="1.633"> မည်သူမဆိုဤကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ် ဦး ကိုထောကျပံ့ဖို့သွားနေလျှင်, ငါ >
< start="239.709" dur="1.601"> ဤကဲ့သို့သောတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုထောက်ပံ့ပါ၊ သူသည်လေလံဆွဲသူကိုသိသည် >
< start="241.311" dur="2.701"> သူသည်လေလံတွင်ငွေသွင်းနေကြောင်းသိသည်၊ သူ၏လမ်းစဉ်၊ >
< start="244.047" dur="2.334"> လူတွေသူ့လမ်းစဉ်ကိုလာကြပေမဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာငါတို့ဘာတွေသိခဲ့ရသလဲငါစဉ်းစားမိတယ် >
< start="246.416" dur="2.201"> 2016 ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ရာများကိုစဉ်းစားပါမည်မျှအရေးပါသည်မဟုတ်ပါ >
< start="248.618" dur="1.667"> ဟီလာရီကြောင့်သင်ငွေမည်မျှငွေပမာဏမည်မျှအရေးပါသည်မဟုတ်ပါ >
< start="250.286" dur="2.735"> သင် HILLARY CLINTON TRUMP ကိုကျော်လွန်ပြီးလမ်းကြောင့်ဖြုန်းတဲ့ငွေ >
< start="253.022" dur="1.2"> ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Trump Campaign ကိုကျော်လွန်ပြီး Clinton နည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘာကိုမြင်နေပါလိမ့်မည် >
< start="254.224" dur="1.767"> ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်ကဘာလဲကြည့်ကြည့် >
< start="255.992" dur="1.3"> ထို့နောက်ရလဒ်, ဒါမိုက်မဲသော AL Bloomberg အလွန်အကျွံသုံးစွဲနိုင်ပါတယ် >
< start="257.293" dur="1.3"> BLOOMBERG သည်သူအလွန်အကျွံငွေများဖြုန်းနိုင်သကဲ့သို့သူလိုချင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်မစဉ်းစားပါ။ >
< start="258.595" dur="1.634"> သူလိုချင်တဲ့ငွေပမာဏမဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ဆက်နွှယ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ >
< start="260.263" dur="1"> မဲဆန္ဒရှင်များကသူနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့သွားနဲ့ငါသွားရဲ့စဉ်းစားပါ >
< start="261.297" dur="1.4"> သူနှင့်ငါ AND ငါအိုင်တီ SUGGEST ဖို့တကယ်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် >
< start="262.699" dur="1.834"> သင်လုပ်တော့မည့်အကြံဥာဏ်ပေးရန်အမှန်ပင်ခဲယဉ်းသည် >
< start="264.568" dur="1.767"> သင်သည်တစ်စုံတစ်ခုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းပြုပါလိမ့်မယ် >
< start="266.336" dur="0.766"> တစ်စုံတစ်ခုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲမှုသင်တန်းဒီဥက္ကID္ဌကြောင့် >
< start="267.137" dur="2.201"> ဒီနည်းကိုလေ့ကျင့်တဲ့အတွက်သင်တန်းကဒီအတွက်ဒီလောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ် >
< start="269.373" dur="1.266"> ဤနိုင်ငံအတွက်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ >
< start="270.64" dur="1.4"> တိုင်းပြည်, သင်အတိအကျဘာလဲဆိုတာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အိုင်တီဆိုတာဘာလဲ >
< start="272.042" dur="1.2"> အပြေးနှင့်ဘာလဲလူတွေကိုပြောင်းလဲချင်နှင့် >
< start="273.243" dur="2.301"> လူတွေအပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးမိုက်ကရိုဖုန်းကိုကျော်ပြီးသူတို့ရဲ့မဲကိုရွှေ့ချင်ကြလိမ့်မယ် >
< start="275.545" dur="0.366"> သူတို့ရဲ့မဲဆန္ဒ MIKE BLOOMBERG ကိုကျော်ရွှေ့? >
< start="275.946" dur="1.967"> Bloomberg? ငါတကယ်မသိဘူး။ >
< start="277.915" dur="1.6"> ငါတကယ်မသိဘူး။ စတီးဝပ် - သင့်ကိုအမြန်ဆုံးပြောချင်ပါတယ် >
< start="279.516" dur="4.704"> စတီးဝပ် - Valentine's အကြောင်းမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ။ >
< start="284.221" dur="0.733"> Valentine ရဲ့မေးခွန်းကိုအကြောင်း။ မနက်ဖြန်အိုင်တီ။ >
< start="284.955" dur="1.3"> မနက်ဖြန်အိုင်တီ။ >> ငါသည်ငါ့ခင်ပွန်း IS မျှော်လင့်ပါတယ် >
< start="286.29" dur="0.766"> >> ငါငါ့ယောက်ျားစောင့်ကြည့်နေသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ >
< start="287.057" dur="2.168"> စောင့်ကြည့်။ စတီးဝပ် - မင်းကိုမပေးခဲ့ဘူး >
< start="289.259" dur="2.101"> စတီးဝပ် - LAB DIAMOND ကိုသူပေးလိမ့်မယ်မဟုတ်လား။ >
< start="291.361" dur="2.401"> LAB DIAMOND, သူလိုမလား >> သူလုပ်ပါသေချာအောင်ကြပါစို့။ >
< start="293.764" dur="1.367"> >> သူလုပ်ပါသေချာအောင်ကြပါစို့။ ငါသူ့ကိုစကားပြောသင့်ထင်ပါတယ် >
< start="295.132" dur="1.433"> သူနဲ့စကားပြောသင့်ပြီးသူမလုပ်ဘူးဆိုတာသေချာအောင်လုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် >
< start="296.6" dur="0.699"> သူမလုပ်ပါသေချာအောင်။ >
< start="297.334" dur="3.135"> သော။ နားထောင်ပါ၊ ငါပျော်ရွှင်ရမယ် >
< start="300.47" dur="1.067"> နားထောင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းထံမှမည်သည့်အရာမဆိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူပျော်ရွှင်ရလိမ့်မည်။ >